चुनाव हारेकालाई छानी–छानी मनोनयन
Tuesday, 22 May, 2018 11:03 AM
काठमाडौं । गत जेठ ३ गते नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अत्यन्तै सुखद् र ऐतिहासिक दिन बन्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा गरेको गठबन्धन र पार्टी एकता गर्ने प्रस्तावलाई जनताले अनुमोदन गरेकाले यी दुई पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भएका हुन् । पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर विभिन्न मिति तोकिए पनि ती मितिमा एकता घोषणा हुन नसक्दा आम जनतामा पार्टी एकता नहुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई आश्वस्त पार्दै कुनै पनि बेला पार्टी एकता घोषणा हुने बताएका थिए । नभन्दै जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितको दासढुंगामा रहस्यमय मृत्यु भएको दिनलाई रोजेर ओली र प्रचण्डले विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पार्ने गरी पार्टी एकताको घोषणा गरे । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एमाले र माओवादी पार्टीको नाम इतिहासमा अंकित गर्दै यी दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाएका छन् । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आशाले यी दुई पार्टीलाई जनताले बहुमत दिएका थिए । पार्टी एकतापछि देशैभरका कार्यकर्ता मात्र होइनन्, मतदाताहरु प्नि खुशी छन् ।
पार्टी एकता घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी भन्ने सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत पार्टीमा आउन आह्वान गरेका छन् । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई पनि यस पार्टीमा समावेश गर्न सकियो भने यो देशको अनुहार कम्युनिष्टहरु नै फेर्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले ‘यो एकता बहुमतका लािग मात्र नभएर सुशासन, समृद्धिका लागि भएको बताउँदै अबको सरकारको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि भएको बताएका छन् । त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निकै उत्साहित हुँदै ‘धेरै खाले उतारचढाव पार गर्दै यो ठाउँसम्म आइपुगेको र अब सबै नेपाली जनता देश बनाउन जुट्नुपर्ने’ बताए । उनले भने– राजनीतिक अस्थिरता र अराजकतातिर जाने छुट दियौं भने हामी कम्युनिष्ट हुनुको औचित्य समाप्त हुन्छ । यो एकता कसैका विरुद्ध होइन, यो एकता राष्ट्र र जनताको आवश्यकता हो’ प्रचण्डले भने ।
जेठ ३ गते नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ४४१ केन्द्रीय सदस्य रहेन छन् । जसमा २४१ एमाले, २०० माओवादी रहनेछन् । त्यसैगरी नौ सदस्यीय सचिवालय र ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहनेछन् । नेकपा एमालेले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यसहित ४१ जना मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाएको छ । एमाले सूत्रका अनुसार सुरुमा केन्द्रीय समितिको नाम अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिसँग छलफल गरेर टुंग्याउने भनिए पनि अन्त्यमा ओली र माधव नेपाल मिलेर भागबण्डा गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको छ । केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा लामो समयदेखि पार्टीको काम गरेको, योग्य, क्षमतावानलाई भन्दा बढी गुटलाई प्रश्रय दिएको आरोप छ । मनोनित केन्द्रीय सदस्यमा ओली गुटमा खगराज अधिकारी, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, नरुलाल चौधरी, डोरमणि पौडेल, तिलकुमार मेन्याङवो, आनन्द पोखरेल, कैलाश ढुंगेल, गुरुप्रसाद बराल, डा. युवराज खतिवडा, रामेश्वर फुँयाल, कृष्ण राई, दयालबहादुर शाही, विनोद ढकाल, गौरी ओली, समीम मियाँ अन्सारी, देवेन्द्र दाहाल, अच्युत मैनाली, देवी ज्ञवाली, एकबहादुर राना, श्रीनाथ बराल र रामेश्वर रानाको नाम परेको छ भने माधव नेपाल गुटले राजेन्द्र गौतम, निरज आचार्य, रविन्द्र अधिकारी, महेश रेग्मी, प्रमोदनारायण यादव, दिलकुमारी पन्त, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, चन्द्रबहादुर शाही, रामेश्वर रानामगर, नरेश खरेल, चन्द्रबहादुर शाही, विमला घिमिरे, गोविन्दविक्रम शाह र लक्ष्मण ज्ञवालीको नाम परेको छ । त्यसैगरी वामदेव गुटबाट भानुभक्त जोशी, बलराम बाँस्कोटा, केशवलाल श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद सुवेदी परेका छन् । यी केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये डा. युवराज खतिवडा नयाँ नाम हो भने अन्य सबै जना नवौं महाधिवेशनमा पराजित नाम हुन् । नवौं महाधिवेशनबाट हारेक अनुहारलाई नै गुटका नाममा केन्द्रीय सदस्यमा चयन गरिनुले भर्खरै स्थापना गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि अन्ततः गुटबन्दीमै रुमल्लिने देखिन्छ ।
त्यसैगरी स्थायी समितिमा पनि ओली र नेपालले भागबण्डा गरेको आरोप छ । स्थायी समितिमा पनि नवौं महाधिवेशनमा हारेका रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल नेपाल गुटबाट, विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ ओली गुटबाट परेका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट विजयी शक्तिशाली महासचिव ईश्वर पोखरेललाई विना कारण हटाइएको छ भने पार्टी एकतामा राम्रो भूमिका खेलेको भनेर विष्णु पौडेललाई महासचिवमा ल्याइएको छ । ईश्वर पोखरेललाई एकताविरोधीको आरोपमा पदमुक्त गरिएको चर्चा पार्टीभित्र चलेको भए पनि पार्टीको भावी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुम्पने बाटो खाली गरिएको विश्लेषण गरिँदैछ । पार्टीमा राम्रो पकड र छवि बनाएका पोखरेललाई एमाले पंक्तिमा भावी अध्यक्षको रुपमा हेरिएको थियो । नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई सघाएका पोखरेललाई सरकार गठन हुँदादेखि नै अन्याय गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीको रुपमा चर्चामा आएका पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ । पार्टी एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका पोखरेलले पार्टी एकतापछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेका थिए । तर, तिनै पोखरेल पार्टी एकतापछि पाखा लाग्ने स्थिति बनेको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई समेत थाहा नदिई गरिएको एकता र पदको बाँडफाँटको कारण पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भएको छ ।
मओवादी केन्द्रसँग यति ठूलो एकता गरिरहँदा एमालेभित्रै गरिएको चर्को गुटबन्दीले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव मात्र होइन, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवहरुसमेत ठूलो अन्यायमा परेका छन् । भर्खरै पार्टी एकता भएको र संगठन नयाँ ढंगले निर्माण हुँदै गरेकोले सबै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । तर, यो अन्यायपूर्ण कार्यविभाजन र जथाभावी गरिएको मनोनयनको ढिला चाँडो भण्डाफोर हुने कुरा एमाले सूत्रले दृष्टिलाई बताएको छ ।